နားဆစ်ဆပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် နားဆစ်ဆပ် (အင်္ဂလိပ်: Narcissus; ရှေးဟောင်းဂရိ: Νάρκισσος Nárkissos သည် ညီဝိုရှားဒေသ၊ သက်စပီယေးမြို့မှ အမဲလိုက်သူတစ်ဦးဖြစ်၍ လှပချောမွတ်မှုကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ ဘိုင်ဇန်တိုင်းခေတ်ကဗျာဆရာ ဇက်ဇီး (Tzetzes) အရ ၎င်းသည် လာကိုနီးယားနယ်သား အမဲလိုက်သူဖြစ်၍ လှပသော အရာရာဟူသမျှကို မြတ်နိုးတွယ်တာသည်ဟူ၍ဆိုသည်။ နားဆစ်ဆပ်သည် မာနာထောင်လွှားရာ ၎င်းကို ချစ်သောသူများကို မထီမဲ့မြင်ပြု၏။ ၎င်း၏ ရှုမောရသော အလှတရားအား စွဲလမ်းမှုကို သက်သေပြစေရန် အချို့ကို သေကြေစေခဲ့သည်။ အတ္တပေမဝါဒ (narcissism) သည် မိမိရုပ်ကိုသာ မြတ်နိုးစိတ်ဝင်စားခြင်း (သို့) စွဲလမ်းခြင်းဥပါဒါန် တစ်ခုဖြစ်သည်။
နားဆစ်ဆပ်သည် မြစ်စောင့်နတ် ဆက်ဖစ်ဆပ် (Cephissus) နှင့် နင့်ဖ်မျိုးနွယ် လစ်ရီရိုပီ (Liriope) တို့၏ သားဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ဂရိကဗျာဆရာ နွန်းနပ်စ်က ၎င်းကို လနတ်သမီး ဆလီးနီ နှင့် လူသား အမ်ဒီမီယန် တို့၏ သားဟုဆိုသည်။
ရှေးဟောင်းရင်းမြစ်များမှ ဒဏ္ဍာရီမူအချို့ ရှင်သန်တည်ရှိခဲ့ကြသည်၊ ဂန္ထဝင်မူသည် စာရေးဆရာ အောဗစ်၏ "ပြောင်းလဲခြင်းများ" စာအုပ်တွဲ၏ တတိယမြောက် စာအုပ်တွင် ပါရှိသည်။ အက်ခိုး (Echo) နှင့် နားဆစ်ဆပ် ဒဏ္ဍာရီမှာ ဤသို့ဖြစ်၏။
တစ်နေ့သောကာလတွင် နားဆစ်ဆပ် သစ်တောတစ်ခု၌ လမ်းလျှောက်စဉ် အောရီးယဒ်တောင်ကို စောင့်ကြပ်သော နတ်သမီး အက်ခိုးက မြင်သည်။ မြင်လျှင်မြင်ချင်း နှစ်သက်ချစ်ကြိက်မိ၍ နောက်ကလိုက်ပါသွားသည်။ နားဆစ်ဆပ်က တစ်ဦးဦးနောက်ကလိုက်သည်ကို သိရှိ၍ "အဲဒီမှာ ဘယ်သူလဲ" ဟု အော်ဟစ်သည်။ အက်ခိုးက "အဲဒီမှာ ဘယ်သူလဲ" ဟုထပ်၍ ထိုအတိုင်း အော်ဟစ်သည်။ နောက်ဆုံး အက်ခိုးက ကိုယ်ထင်ပြ၍ နားဆစ်ဆပ်ကို ဖက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့လေသည်။ ၎င်းက ဖယ်ရှောင်၍ ထွက်ခွာသွားရန် ပြောဆိုရာ နှလုံးကြေကွဲခံစားရပြီး ဘဝတစ်သက်တာလုံး လုသူမဲ့လျှိုမြောင်များထဲ၌ နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ပဲ့တင်သံသည်သာ သူမနှင့်အတူ ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ အငြှိုးကလဲ့စား နတ်ဘုရားမ နဲ့မဆစ် (Nemesis) (အဲဖရာဒိုက်တီ၏ အရည်အသွေးတစ်ရပ်) က ထိုအကြောင်းကိုသိရှိကာ နားဆစ်ဆပ်ကို အပြစ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ တစ်ခုသောနွေကာလ၌ နားဆစ်ဆပ်သည် အမဲလိုက်ပြီူ ရေဆာလာရာ ထိုနတ်သမီးက ရေအိုင်တစ်ခုသို့ မျှားခေါ်သည်။ ထိုအိုင်တွင် ၎င်းက ကိုယ်ကို ညွတ်လိုက်ပြီး ၎င်း၏ နုပျိုမြစ်သောရုပ်အဆင်းကို မြင်သည်။ နားဆစ်ဆပ်က ထိုရုပ်အဆင်းသည် မိမိ၏ ပုံရိပ်မှန်းမသိရှာဘဲ အခြားသူဟု ယူဆကာ နှစ်နှစ်ကာကာ စွဲလမ်းမြတ်နိုးသွားသည်။ ၎င်းပုံရိပ်၏ ညှို့ဓာတ်ကို မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပေ။ နောက်ဆုံး၌ သိသွားသည်မှာ သူကချစ်သကဲ့သို့ သူ့အပေါ် ပြန်မချစ်နိုင်မှန်းသိရှိခဲ့၍ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှ တဏှာမီးလောင်ကျွမ်း၍ ရွှေရောင်နှင့် အဖြူရောင် ပန်းပွင့်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
အစောပိုင်းမူတစ်ခုသည် နိုက်ဆီးယာဒေသမှ ပါးသန်နီးယပ်စ်၏ လက်ရာဖြစ်၍ ဘီစီ (၅၀) ခန့်က ရေးစပ်ခဲ့ကာ ၂၀၀၄ တွင် ဒေါက်တာ ဘန်ဂျမန် ဟန်နရီက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဟန်နရီသည် အောက်စဖို့ဒ်မြို့က Oxyrhynchus papyri (ရှေး ပေစာ၊ ကျူစာ မူများ ရှာသူအဖွဲ့) အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ အောဗစ်မူနှင့် မတူသည်မှာ နားဆစ်ဆပ်သည် အသက်ရှင်လိုခြင်းမရှိသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေသည်ဟု ဆိုထားသည်။ ဒဏ္ဍာရီဆရာ ကိုနွန်ရေးသော မူသည် အောဗစ်မူနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်၍ ထို၌ နားဆစ်ဆပ်က သတ်သေသည်ဟုပင် ဆိုလေသည်။ ထိုမူ၌ အာမေးနီးယပ်စ်ခေါ် လူငယ်တစ်ဦးသည် နားဆစ်ဆပ်ကို ချစ်ကြိုက်ခဲ့၏။ နားဆစ်ဆပ်က အမျိုးသားချစ်ရေးဆိုသူများကို မထီမဲ့မြင်ပြု၏။ ဤတစ်ခါတွင်လည်း ထိုသို့ပင် ခါးခါးသီးသီး ငြင်း၍ အာမေးနီးယပ်စ်ကို ဓားတစ်ချောင်းပေးလိုက်သည်။ အာမေးနီးယပ်စ်က နားဆစ်ဆပ်အိမ် လှေကားထစ်တွင် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် နတ်ဘုရားများထံသို့ ၎င်းခံစားရသော ဝေဒနာများအတွက် နားဆစ်ဆပ်ကို သင်ခန်းစာပေးရန် ဆုတောင်း၏။ နားဆစ်ဆပ် ရေအိုင်တစ်ခု၌ လမ်းလျှောက်နေရင်း ရေသောက်ရန် ပြင်ဆင်သည်။ မိမိပုံရိပ်ကို ရေ၌မြင်၍ ညှို့ယူခံရသည်။ ၎င်း၏ အာသာဆန္ဒအရာကို မရနိုင်သောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေသည်ဟု ဆိုထားပေသည်။ နှစ်တစ်ရာကြာပြီးနောက် ပထဝီဆရာ ပေါဆေးနီးယပ်စ်က ယင်းဇာတ်လမ်း၏ မူကွဲတစ်ခုကို ဝတ္ထုရေးဖွဲ့မှတ်တမ်းပြုခဲ့ရာ ယင်း၌ နားဆစ်ဆပ်သည် မိမိကိုယ်ကို ချစ်သည်မဟုတ်ဘဲ အမွှာမွေးချင်းတော်သူ ညီမကို ချစ်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားသည်။ မူအားလုံးတွင် ၎င်း၏ ကိုယ်ခန္ဓာပျောက်ဆုံး၍ ကျန်ခဲ့သည်မှာ နားဆစ်ဆပ်ခေါ် ပန်းပွင့်တစ်ခုသာ ဖြစ်လေသည်။
↑ Rhodewalt၊ Frederick (2007)။ Narcissism။
↑ The myth of Narcissus။
↑ Aprodite Wrath: Narcissus။
↑ ၇.၀ ၇.၁ The myth of Narcissus။
↑ David Keys, "Ancient manuscript sheds new light on an enduring myth", BBC History Magazine, Vol.5No.5(May 2004), p.9(accessed 30 April 2010);
↑ Keys၊ David (2004-05-01)။ The ugly end of Narcissus။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နားဆစ်ဆပ်&oldid=684051" မှ ရယူရန်
ဂရိ ဒဏ္ဍာရီလာ ဇာတ်ကောင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။